Iindawo ezili-10 zaseSpain zokubaleka ubusika obubandayo | Iindaba Zokuhamba
Iindawo ezili-10 eSpain zokubaleka ubusika obubandayo
Susana Garcia | | Spain izixeko, España, ngokubanzi
Singaphakathi ubanda obugcweleyo, kwaye inyani kukuba sonke sifuna ukubuyela kwixesha lasehlotyeni, kobo bushushu nakwiintsuku zolwandle. Emantla, embindini nakwiindawo zeentaba kulapho ziba kubanda khona, kwaye ngokuqinisekileyo abaninzi sele becinga ngokwenza indawo yokubaleka baye kwenye indawo eshushu kancinci. Kungenxa yoko le nto siza kukunika izimvo ezimbalwa.
Zininzi iindawo apho zisinika khona ukufudumala okungakumbi ngaphandle kokushiya iSpain. Kwaye sinendawo ezintle zokundwendwela kunye neendawo apho imozulu ihamba kancinci kancinci kule mihla, ukuze sikwazi ukubaleka ubusika obubandayo. Qaphela ezi ndawo zilishumi zisondele kakhulu, ukuze ukwazi ukonwabela imeko eshushu kwaye ucinge ngehlobo.
ICádiz sisixeko esihle esinokulahleka kuso. Inabantu abasincedayo siziva sikhululekile, kunye nendawo endala apho unokufumana iivenkile ezincinci kunye nezikwere eziphakathi apho unokufumana khona isiselo kwi-terrace nakwilanga. Nangona ngokucacileyo imozulu ayifani nehlobo kwaye singekhe sihlambe emanzini adumileyo Unxweme lwaseCaletaEwe siyazibona zonke ezi meko. Kwaye ukuba siyayithanda imidlalo yamanzi efana nekitesurfing, sikwindawo efanelekileyo.
Ukuba siyishiya ipeninsula singaya eCeuta, indawo apho ezinye iinkcubeko zixubeka khona kwaye zinokusinika okuninzi. Bona iindonga zasebukhosini, ezisithuthuzela kumaxesha amandulo, okanye ukutyhubela ipaki yeMeditera. Kukho neziqithi ezincinci ezikufutshane, ezinjengePerejil okanye iSanta Catalina. Sinokuhamba ngokunyuka intaba eMonte Hacho, kwaye siya kuba kufutshane kakhulu neMorocco, ukuba sifuna ukwenza enye indlela yokubaleka.
IMelilla sesinye isixeko esikwilizwekazi laseAfrika eliseSpeyin, apho singonwaba khona ngeli xesha lonyaka. Singahamba ngeHernandez Park, kodwa enye yezona zinto zinomtsalane kukubona Inkulungwane ye-XNUMX yenqaba. Inezinto ezintathu kwezine ezibiyelweyo ezibiyelweyo. Ezinye iindawo oza kuzibonayo yiPlaza de España okanye iMyuziyam yaseMkhosini.
E-Alicante ngeli xesha kusabanda, kuyinyani, kodwa kungabandi njengakwezinye iidolophu ezisembindini okanye emantla, kungangumbono olungileyo wokubaleka ngempelaveki. Singanyuka siye kwelakudala Inqaba yaseSanta Barbara, Apho kukho umbono omangalisayo, kwaye ubone isiqithi saseTabarca, indawo ekwayindawo ekufanele ukuba uyibone njengoko iyipaki yendalo.
I-Ibiza yenye yeendawo ezinomdla esizifumana ebusika. Akukho moya ungako kwesi siqithi njengasehlotyeni, kodwa yindlela ekhululeke ngakumbi yokuyibona. Asiyi kuya elwandle kodwa sinokuhamba ngokuzolileyo UDalt Vila kwaye amaxabiso aqinisekile ukuhla kakhulu kwixesha eliphantsi. Zininzi iimbombo ezizolileyo, iidolophu kunye neelwandle ukuzibona ngaphandle kokuya ehlotyeni, xa yonke into igcwele ngabakhenkethi.
KwiiCanary Islands sifumana omnye umthambo wokubaleka ubusika obubandayo. Kwaye kule meko sinokude siye elwandle, kuba amaqondo obushushu angangama-25 degrees kwezi ziqithi. UFuerteventura ngomnye wabo, kunye notyelelo olunyanzelekileyo lokuya intaba iTindaya, okanye ulwandle oludumileyo lweCofete. Ungandwendwela needolophu ezincinci ezinje nge-El Cotillo, okanye iLa Ampuyeta.
ILanzarote yenye indawo ekuhlala kuthanda ukuba nabantu ehlotyeni, kodwa iyonwabele imozulu entle unyaka wonke. Kwesi siqithi sinokonwabela iilwandle esimnyama esimnyama, kodwa kunye nokutyelela okunje Ipaki yesizwe yaseTimanfaya, okanye iCueva de los Verdes, itonela elenziwe yiCorona Volcano.
Kwisiqithi saseTenerife sikwanesibonelelo esihle unyaka wonke ngemozulu entle. Asiyi konwaba kuphela echibini lehotele, kodwa nakwiilwandle ezinjengePlaya de Los Cristianos okanye iLa Tejita. Inkqubo ye- Utyelelo lukamama Kuyimfuneko, ukunyuka ngemoto yayo yekhebula ukuze ube nembono entle ngesiqithi. Sinokundwendwela iLoro Parque okanye iSiam Park, ipaki yamanzi emnandi kakhulu.
Ngoku siya emazantsi usingasiqithi, kwaye iMalaga inokuba yindawo elungileyo ngexesha lasebusika. Imozulu isakulungile ukonwabela ICosta del Sol, kodwa ukuba akukho lusuku lolwandle, sinezinye izinto ekufuneka sizenzile, ezinje ngokubona iAlcazaba okanye iRoma Theatre.
Esinye isixeko esisemazantsi esinokusinika izinto ezininzi ezinomdla. E-Seville asifumani kuphela indawo endala enomdla, kodwa zininzi izikhumbuzo ekufuneka sizibonile, ezinje ngeGiralda, iTorre del Oro okanye i Alcazar yokwenyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iindawo ezili-10 eSpain zokubaleka ubusika obubandayo
UMaria del Mar sitsho
Uxolo kodwa ulibele ukukhankanya iAlmería. Namhlanje ngentsimbi yesibini emva kwemini bekuziidigri eziyi-18
Phendula uMaria del Mar
UGloria Rodriguez sitsho
USusana, kufuneka ndikuxelele ukuba iGran Canaria sisiqithi esaziwa ngokuba sinemozulu entle kwihlabathi ngenxa yomoya obangela ukuba ubushushu bumnandi entwasahlobo unyaka wonke kunye nokucacisa ukuba iPlaya del Inglés ayikho eTenerife kodwa kwiGran Canaria.
Phendula uGloria Rodríguez
IPlaya del Inglés ayikho eTenerife kodwa eGran Canaria, kuya kufuneka ujonge iindawo
Andiqondi ukuba uyazi ukuba i-COSTA DEL SOL yinyani ALMERÍA apho kukho iiyure ezininzi zokukhanya kwelanga ngonyaka kunye nobushushu obuzinzileyo unyaka wonke. Uhlala esilibala. Yeyiphi intloni engaka yokungazi.
Andazi ukuba ufunde phi kodwa ndikunika u-0 ulibele i-ALMERÍA apho sineqondo lobushushu liphezulu peninsula, nangona ibuhlungu abaninzi ...
UAna isabel guadalupe sanabria sitsho
Iminyaka izakudlula kwaye sizakuqhubeka ukuba sisiqithi esinethamsanqa, kodwa silibalekile, manene, ulwandle lwesiNgesi luseGran Canaria, kwaye andivumelani nezimvo zokuba lolona lwandle lubalaseleyo kwezi ziqithi, siqithi ngasinye nomtsalane wayo namanxweme ayo amangalisayo. Zibhale phambi kokubhala amanqaku. Enkosi.
Phendula Ana isabel guadalupe sanabria
Kwaye ubundixelela ntoni ngeLas Canteras elunxwemeni?
IGran Canaria inye kuphela kwaye ayinakuthelekiswa nanto.
Sivuyela ubushushu obugqwesileyo.
Susana Garcia sitsho
Ewe ndenze impazamo esele ilungisiwe. Ndiyaxolisa ukukhubekisa umntu ukuba bekunje kodwa hayi, andazi onke amanqaku eSpain ngentloko. Ngapha koko u-Antonio, ndicinga ukuba bekungekho mfuneko yokuthuka, kuba sonke singabantu kwaye sinokwenza iimpazamo, akunjalo?
Phendula uSusana Garcia
Ndwendwela iBelfast kunye neDublin
Tyelela eLondon nase-Edinburgh